स्थानीय निर्वाचन : कुन दलको घोषणापत्र कहिले ? - केन्द्र खबर
स्थानीय निर्वाचन : कुन दलको घोषणापत्र कहिले ?
२०७८ चैत्र २७ १३:२५
स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब ३३ दिन मात्र बाँकी छ । १३ दिनपछि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।